လမ်းပြကြယ်: ကမ္ဘာ့ နေရာအသီးသီးက မြန်မာလူထုရဲ့ ဆန္ဒများ
ကမ္ဘာ့ နေရာအသီးသီးက မြန်မာလူထုရဲ့ ဆန္ဒများ
(15th.DEC.2011) face book ပေါ်မှ ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့်နိုင်ငံကျဉ်းသားတို့အတွက်တောင်းဆိုမှုများ
Kaung Lay Nge
ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့်တကွနိုင်ငံေ၇းအကျဉ်းသားအားလုံးကိုအမြန်ဆုံးလွှတ်. (15.12.11 8.00am Thai)
ကိုမင်းကိုနိင်နှင့်အတူ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေကြရသော နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ အားလုံးကို အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးပါ။ တိုင်းပြည်ကို အမှန်တကယ် တိုးတက်စေချင်လျှင် ပြည်သူ့အသံကို နားထောင်ပါ။ ဒါမှသာ ပြည်သူ့ အစိုးရဖြစ်ပါမည်။
thailand 10:36 15 december 2011
ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးဖြစ်စဉ်တွင်ခုန်ရန်လည်းမလိုသလို၊ရပ်နေရန်လည်းမသင်.ပါ။ မှန်မှန်နှင်.သွက်သွက်လျှောက်လှမ်းသင်.ပါသည်။၂၁ ရာစုရဲ.အတိုးတက်ဆုံးအာရှမှာ ပညာရေး၊စီးပွားရေး၊နိုင်ငံရေးတို.အတွက်ကျားများတစ်ကောင်ပြီးတစ်ကောင်ပေါ်ထွန်းလာ နေပါပြီ။မြန်မာကိုဖွတ်ကျားအဆင်.မှာချန်ထားရစ်မှာလား။ပြန်လည်ရင်ကြားစေ.ရေးနှင်. အမျိုးသားစည်းလုံးရေးတို.အတွက်ထာဝရပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိုတည်ဆောက်ရမည်။ ကိုမင်းကိုနိုင်နှင်.နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချက်ခြင်းလွှတ်ပေးပါ။
ကျုပ်တို့သူရဲကောင်းတွေကို ပြန်လွှတ်တော့...
ကိုမင်းကိုနိုင်အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံး(အားလုံးနော်) ချက်ချင်းလွှတ်...း((
ဒီအစိုးရ တခုခု တော့မှားနေပြီ..အကြောက်လွန်နေတာလား?? လူစကားနားမလည်တာလားပဲ။ ဒီမိုကရေစီကို လိုလား တောင်းဆိုကြလို့ ပုဒ်မတပ် အဖမ်းခံနေရတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို ဒီမိုကရေစီ ဖေါ်ဆောင်နေတဲ့ အစိုးရဆိုရင် ဘာလို့ လက်မတွဲနိုင်ပဲ ထိန်းသိမ်းထားတာလဲ။ မင်းတို့ သဘောထားသာ မှန်ခဲ့ရင် မင်းကိုနိုင် နဲ့ တကွ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကို လွှတ်လိုက်ပါ။
ငါတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုမင်းကိုနိုင်မှာသိန်းစိန်လဒ ကြောက်ရွံ့ရမဲ့အရည်အချင်းတွေအားမာန်တွေ အပြည့်ရှိတယ်..သူ့ရဲ့ဦးဆောင်မှုတွေကိုငါတို့ပြည်သူတွေလိုလားတယ်...
သူဟာငါတို့ပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တခုပါ.. "ကိုမင်းကိုနိုင် နှင့်နိုင်ငံေ၇းအကျဉ်းသားအားလုံးကို အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးပါ"
မြန်မာပြည်မှာ မင်းကိုနိုင်နှင့်တကွ ဒီမိုကရေစီ ဖောင်ဒါ(founders)တွေကို ထောင်မခါဘဲ(အကုန်မလွှတ်ပေးဘဲ) ...ဒီမိုကရေစီတည်ဆောက်မယ်ဆိုတာ မလုပ်ကောင်းဘူး။
အခု ချက်ချင်း ထောင်တံခါးတွေ ဆွဲဖွင့်ပေးကြပါ။(အဝေးကနေ ဟောက်နေသော- အဝေးရောက် အိုးဝေအောင်)
မတရားဖမ်းဆီးခံထားရသော ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့်တကွ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများအားလုံး အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်ပါစေ။
လက်ရှိ အကျဉ်းကျနေတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကို လွှတ်၊မလွှတ်တော့ မသိဘူး..။ အကျဉ်းထောင်မှာ ဘုန်းကြီးကျောင်း ထပ်ဆောက်ဖို့တော့ ပန္နက်ရိုက်နေကြပြီ..။ အကျဉ်းထောင်တွေထဲအထိ သာသနာ ထွန်းကား ပြန့်ပွားအောင် လုပ်ဆောင်ကြမယ် ထင်ပါ့..
ဒီမိုကရေစီဆိုတာ ခြင်းကြားရေယိုပြောတဲ့စကားလား ပြောင်ကြီးသိန်းစိန်ရေ?
ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် မင်းကိုနိုင် အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အားလုံးကို
ဒီဇင်ဘာ ၃၁ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီးလွှတ်ပေးရန် မြန်မာနိုင်ငံ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အား
မြန်မာနိုင်ငံမျိုးဆက်သစ် ကျောင်းသားနှင့်လူငယ်များ အဖွဲ့မှ အလေးအနက် တောင်းဆိုသည်။
မိမိတို့၏ ငြိမ်းချမ်းစွာ တောင်းဆိုသော ဆန္ဒ သဘောထားအား အသိအမှတ်မပြုပါက အမာခံ အဖွဲ့ဝင်များသည် ဇန်န၀ါရီလ ၁ရက်နေ့မှစတင်ကာ မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့အပြားတွင်ရှိသော တတ္ကသိုလ်
ကျောင်းပေါင်းစုံမှ အမျိုးသားရေး စိတ်ဓါတ်ရှိသည့် ကျောင်းသားနှင့်လူငယ်များကို ခိုင်မာစွာ စုစည်းပြီး နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား အားလုံး လွတ်မြောက်ရေး အတွက် ကြိုးပမ်း နေကြသော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းကာ အင်အား တောင့်တင်းစွာဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားတွင်
ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁ရက်နေ့မှစပြီး နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အားလုံးလွတ်မြောက်ရေး အတွက် နည်းမျိုးစုံဖြင့် ဆန္ဒပြ တောင်းဆို တိုက်ပွဲဝင်ကြမည်။
မင်းကိုနိုင်၊ကိုကိုကြီး၊ကိုဌေးကြွယ် နှင့် အတူ ၈၈ ခေါင်းဆောင်များအားလုံး........ အရှင်ဂန္ဘီရ နှင့် ဦးခွန်ထွန်းဦးတို့အားလုံး ချက်ခြင်းလွှတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။ သိန်းစိန်(့ ဒေါင်းယောင်ဆောင်ထားသောကျီးယုတ်) ကို နည်းပေါင်းစုံဖြင့် ဖြုတ်ချမှသာလျှင် တိုင်းပြည်အေးချမ်းမည်။ ယ္ခု ရွှေညဝါ ဆရာတော် အရေးပါ ကျနော်တို့ ပခုံးပေါ်ကျလာပြီ အားလုံးနိုးကြားတက်ကြွနေကြဖို့ အခြင်းခြင်းလက်တို့ နေကြပါ။ 2012 မြန်မာ့ လှိုင်းလုံး ကမ္ဘာကိုဖုံးလွှမ်းနိုင်မှသာ ကျောင်းနံရံမှာ ဒေါင်းအလံ စိုက်နိုင်မည်၊ မျိုးဆက်သစ်+မျိုးဆက်ဟောင်းများ အပြန်အလှန် ယုံကြည်ဖေးမစွာဖြင့် လက်ချင်းချိတ်ဆက်ဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ။
ထောင်ထဲမှာ နိုင်ငံေ၇း အကျဉ်းသားတွေ ၇ှိနေသေ၇ွ့ ....
ကိုမင်းကိုနိုင် နှင့်နိုင်ငံေ၇းအကျဉ်းသားအားလုံးကို အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးပါ
မလွှတ်တဲ့အပြင် ထပ်ထည့်ဖို့တောင် ကြံစည်နေတဲ့ အစိုးရ။ ဒါလား မတူတာတွေ ဖယ်ထားပြီး၊ တူတာတွေ ပေါင်းလုပ်မယ်ဆိုတာ။ မတူတာတွေကို ဖယ်ရရင် သိန်းစိန်အစိုးရတခုလုံးကို ဖယ်မှ ပြီးမှပဲ။
ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးပါ (2011.DEC.15) 11:43pm Japan Standard Time.
ဟိုလိုလိုဒီလိုလို ဟန်ဆောင်ကတိတွေ တို့မယုံဘူး။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ပေးခြင်းဖြင့်